Factorylọ ọrụ China na ndị na-emepụta China HPHT BLUE | GIGAJEWE
Aha Brand: GIGAJEWE
Number Model: HPHT
Ibe Ahu Karatu: 1ct
Diamondcha acha odo odo: D
Mbipu Diamond: Magburu onwe ya
Agba: Agba ọcha
Ihe isi ike: 10 Moh
Ebe Si Malite: Zhejiang, China
Diamonddị Diamond: Synthetic (nyocha emere)
Asambodo Diamond: IGI
Agba Fancy Diamond: Uhie na-acha odo odo na-acha odo odo
Nkọwapụta Diamond: VVS1
Mmelite nke Diamond: Egwurugwu ndị jupụtara
Aha Ngwaahịa: diamond HTHP
Otu ngwugwu otu:
Otu nnukwu ibu:
1. akpa na akpa ikuku ma ọ bụ akpa poly. 2. juru n'ọnụ na plastic na katọn ikpe. 3. Dika onye cho ahia choro.
Otutu (Carats) 1 - 10 > 10
Est. Oge (ụbọchị) 3 Ka ewekorita ya
HPHT, ma ọ bụ okpomoku dị elu na mgbali nrụgide, na-eyi ọnọdụ gburugburu ebe eji eme diamond na-eme kilomita 150 n'okpuru elu ahụ. N'okpuru okpomoku dị elu na nrụgide - ihe dị ka ihe dị ka puku Celsius 2000 na 5.mospheres 5.8 ka a na-ejigide kristal nke diamond, ma ọ bụ na-eji obere kọlụm emepụta ya. Ihe omuma ya bu ihe eji eme diamond ka enye ya mkpa ya na carbon.This diamondally bred diamond bu ihe a na achoghi idi na ya.
Okaladi nke emeputara na laabu, kariri iweta n’ala. Ndị a abụghị akụ ọkpọ, ha abụghị Cubic Zircon, ha abụghị kristal. Ha bu oladi di na ya na uwa ozo .Ekwuputara, Federal Trade Commission na udu mmiri nke 2018, ewezuga na ha riri ihe dika 40% di obere Mined.
Gịnị bụ diamọnd CVD. .
Diamond CVD (Chemical vapour pamition) bụ methord nwere ike iji mepụta diamond sịntetik site na imepụta ọnọdụ, ọ dị mkpa maka carbon atoms na gas iji dozie mkpụrụ na kristal, ọ bụ diamond akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'ezie.
Diamond CVD anyị bụ dayamọnd dị ọcha, enweghị ntụpọ, ụdị IIa diamond.
Ndị ahịa anyị bụ ikike ịnya ụgbọ ala anyị, nke pụtara na anyị bụ nke anyị ma diamond anyị ji CVD. Ihe ndị a bụ ụkpụrụ anyị bụ isi.
HPHT (Ọnọdụ okpomọkụ dị elu) diamonds
HPHT (Ọnọdụ okpomọkụ dị elu) Oke olaji na-ahụ ihe etu esi emepụta diamọnd dị omimi n'ime ụwa jikọrọ ọnụ. A na-eji igwe pụrụ iche eme ihe iji wulite nrụgide nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60,000 na-efe efe na okpomọkụ nke ogo 2,500 Celsius iji bido na uto nke ọla edo nke HPHT. A na - akụ mkpụrụ ndụ ndị pụrụ iche nke nwere ihe dị mkpa maka itolite dayamọnd dịka ọla edo edowo anya nke ọma na ngwakọta mgbaze mejupụtara ọla na ntụ na - etinye n'ime ụlọ HPHT ebe enwere okpomọkụ na-agbanwe agbanwe ruo ogo 30000 Celsius ma karịa 50,000 atmospheres nke nrụgide. Ihe na - eme ka mkpụrụ ndụ dị n’ime ya na - agbanwe sel dị iche iche site n’ụdị siri ike n’ụdị a wụrụ awụ.
N'ime ụbọchị ole na ole ma mgbe ọnọdụ ole na ole gasịrị, usoro jụrụ oyi ga-amalite. Nke a na - ewe ụbọchị ole na ole ma mee ka carbon carbon atọm na mkpụrụ atọm. Ewepu sel ahụ n’ime igwe HPHT naanị mgbe enwere ya n’aka na ejirila okirikiri ito eto.
Anyị bụ ndị na-emepụta ihe na ndị na-ere ahịa: Lab-Grown Diamond, Chemical Vapor Deposition Diamonds, HPHT Diamond.
Nke gara aga: HPHT WHITE
Osote: HPHT CRUSHING DRILL
Siri Roti Robe